Ini Handikwanise Kuzviita Zvese! | Martech Zone
Chishanu, December 9, 2011 Chishanu, December 9, 2011 Lavon Tembere
Kana zvasvika pakuve pamazororo, unonzwa vanhu vazhinji vachitaura mashandisiro avanogona kuita mamwe maawa mashoma pazuva. Kana kana vakagona kuzvibatanidza, vanogona kuve vari munzvimbo mbiri kamwechete uye vawane zvimwe zvakawanda zvakaitwa. Izvo zvakafanana zvinogona kutaurwa nevatengesi uye manzwiro avanofunga nezve avo eemail zvirongwa. Mazhinji makambani haana hunyanzvi hwechikwata chese chevatengesi veemail uye vanomanikidzwa kuvimba nemunhu mumwe kana vanhu vashoma kuti vatonge chirongwa chavo chose.
Ndinoiwana, saka rega ndipe pfungwa dzinoverengeka dzinogona kukubatsira kuti unzwe sekunge une timu yekushambadzira iri kutonga chirongwa chako pachinzvimbo chekungozvipa iwe wega.kubhadharwa nevashambadziri uye nemanzwiro avanonzwa maererano nezvirongwa zvavo zveemail. Mazhinji makambani haana hunyanzvi hwechikwata chese chevatengesi veemail uye vanomanikidzwa kuvimba nemunhu mumwe kana vanhu vashoma kuti vatonge chirongwa chavo chose.
Kugadzirira kutumira makarenda inzira yakanaka yekugara wakarongeka, asi zvakare batsira iwe kuronga kumberi. Sarudza kuti kangani iwe waunoda kutumira kune vateereri vako uye wozvinyora mukarenda. Iwe unogona zvakare kuenda kusvika pakuona kuti ndeupi meseji waunoronga pakutumira futi.
Matemplate & Zvemukati Maraibhurari inobvumidza iwe kutora iyo ruzivo iwe yawakaisa uye yakarongeka mune yako yemukati khalendari uye wotanga kuigadzira Gadzira akati wandei matemplate munguva yako yekusiya kuti uve nawo kana iwe uine tsamba yekutumira kuenda mune ramangwana uye iwe wakarongedzwa kwenguva.
Autoresponders inogona kumisikidzwa kuti iite otomatiki kune zvimwe zviitiko. Semuenzaniso, kana mumwe munhu akanyorera kune yako tsamba yekutumira, iwe unogona kuseta otomatiki email yekutumira inovagamuchira inogamuchira uye ichivapa iwo mamwe mafoni ekuita.
Iwe unogona kushandisa maturusi aya kusimudzira kuedza kwako kushambadzira email uye kupa vateereri vako chirongwa chakakura cheemail, asi pasina kunzwa sekunge iwe haugone kuzviita zvese. Panzvimbo iyoyo, iwe unonzwa senge une timu yakazara inokutsigira iwe mukukanda iwo maemail anotyisa!
Tags: autoresponderszvemaraibhurarikutumira makarenda
Wepamusoro 20 Kushambadzira Automation Solutions
Zvita 9, 2011 na12:08 PM
Chinyorwa chakanaka, @lavon_temple:twitter ! Vhiki rino rave rimwe revhiki dzandakambokanganwa kuti raive zuva ripi nezuro. Zvinoita sekunge zvatonyanya kushata sezvo tave pedyo nekupera kwegore - makambani ese ari kuyedza kugadzirisa hurongwa hwavo hwekupera kwegore uye kushanda muna Ndira. Wow… takazadzwa nemvura.
Zvita 10, 2011 na2:45 PM
Ini ndinoda zano rekutumira makarenda. Kunyangwe iwe ukaita izvi nenzira yekupedzisira ye-lo-tech (karenda huru yemadziro), inogona kubatsira kujekesa ndiro yako uye kuisa pfungwa dzako pane zvimwe zvinhu.